तिमी, आफ्नो सुन्दरताको घमण्ड कहिल्यै नगर्नु । जस्तै कि, गरेनन फूलहरूले सुगन्धको विज्ञापन जसको वासनामा हरेक मान्छे लोभिन्छ । हिराले आफ्नो मूल्य नतोकेर नै संसारको महँगो वस्तु भैदियो । कोइलीले मिठो आवाज रेकर्डको लागि आवेदन दिन उचित ठानेन् । कसलाई मन पर्दैन
रोशन यक्सो / मागेर पैंचो मेरो ओठको मुस्कान युगौदेखि मुस्कुराई रहेछ हिमाल अनि पो सधैं सधैं यति सुन्दर, कन्चन र निर्मल देखिन्छ त्यो ! मैले आफ्नो भागको सिन्दूर दिएकी हुँ उसैलाई अनि पो पहाड पखेरा रातै पारेर फुलेको छ गुराँस ! आफ्नो छातिको उचार्इ सापटी दिएकै कारण त हो स्वाभिमानको
गाई जलेर मरेको गोठमा यसरी फर्कंदैछ खुसी
काठमाडौँ । जित्नेहररूका लागि हरेक समस्या एउटा नयाँ बिहान हो, हार्नेहरुका लागि जिन्दगी समस्या नै समस्याहरुको चिहान हो । यो कथा बाबुराम कार्की र उनकी सानी छोरीको हो, यो कथा एक सय २२ वटा गाईको हो । यो कथा कुनै महान कथाकारले रचेको काल्पनिक कथा भन्दा कम छैन् । तर, यो नियतिले रचेको कथा हो । हो, बारम्बार पछारिँदै
वनसाङ्ग्लाले घर बिथोल्ने योजना खुटेकाछन् अरे ! पाउरोटी र ललिपपका लागि आफन्त फुटेकाछन् अरे ! भूइँचालोले पिरोल्यो, नाकाबन्दीले बिलखबन्द पा¥यो, नेता भनेकैले जनताले पाउने राहत लुटेकाछन् अरे ! यो वर्खामा पनि सर्वतसँग खाइने सातु के पाइएला, खै, दातव्यको मकै दाताकै कप्टेराले भुटेकाछन् अरे
प्रमोद भण्डारी #मुक्तक भन्देको छु, कुबुद्धी नहोस् खराब मन नहोस् । छिमेकीको कुरा सुनेर घरमा भनाभन नहोस् ।। विभिन्न प्रलोभन देखाएर क्रिश्चियन बनाईंदैछ, बिदेशीको रणनीति हो, धर्म परिवर्तन नहोस् ।।
कविता : धर्म परिवर्तन गराउन नखोज
के.आर. पाण्डुलिपि मिलेको जिउडाल सुन्दर नयन खुल्ला केश, मिलेका दन्तलहर गुलावी ओठले मन्द मुस्कान छर्दै कोकिल कण्ठले बोल्दै एक सुन्दरी आइन समीपमा मनमा त्यसै तरङ्ग आयो जिउमा जोस भरिएर आयो बसिन समीपमा बोलिन सुस्तसुस्त र भनिन् म खोल्छु देखाउँँछु म जसो भन्छु त्यसै गर मैले सहमतिको टाउको